Maphakathi nendawo ye-Rhein-Main, (cishe) phakathi nendawo eluhlaza - I-Airbnb
Maphakathi nendawo ye-Rhein-Main, (cishe) phakathi nendawo eluhlaza
Mörfelden-Walldorf, Hessen, i-Germany
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Franz
U-Franz Ungumbungazi ovelele
Igumbi elinekona lekhishi elihlanganisiwe kanye neshawa/indlu yangasese ehlukene inomnyango wayo futhi alinazithiyo. Itholakala endlini enemindeni emibili. Ikhishi lifakwe izinto zokupheka eziyisisekelo kanye nesiqandisi. Ikhabethe, isifuba samadrowa, itafula nezihlalo ezimbili, umbhede ophindwe kabili.
I-Mörfelden itholakala phakathi nendawo ye-Rhine-Main, ukusuka lapha iFrankfurt, iDarmstadt, iWiesbaden, i-Mainz ingafinyelelwa ngokushesha futhi kalula kokubili ngabanye nangezithuthi zomphakathi. Isikhumulo sezindiza i-FRAPORT sisendaweni eseduze ngebhasi ne-S-Bahn.
Indawo ngokwayo iyidolobhana elincane laseHessian, elizungezwe ihlathi, elibonakala ngeRhine yasemadolobheni / Isakhiwo esikhulu.
4.93 · 108 okushiwo abanye
Ebangeni lokuhamba ngezinyawo (maphakathi ne-500m) kukhona amakhefi amaningana, izindawo zokudlela, ama-Hessian "inns", ama-snack bars njll. Indawo yesibili ngobukhulu yase-Hessian "Mönchbruch" (phakathi kwe-Mörfelden ne-Rüsselheim) ingafinyelelwa ngokunethezeka ngezinyawo (2.5km).
Umuntu oxhumana naye uhlale etholakala. Izinsuku ngohlelo.
UFranz Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Mörfelden-Walldorf namaphethelo